MISY MANAFINA NY SOLIKA AO MANDRITSARA : Tafiakatra 5000 ariary ny 1 litatra
Araka ny loharanom-baovao voaray, omaly 8 jolay avy any Mandritsara dia fantatra fa tsy misy solika ao an-toerana ary saika ilaharana avokoa ireo tobin-dasantsy no sady vidiana dimy arivo ariary ny 1 litatra. 9 juillet 2019
Raha ny feo niely nanerana ny tanàna dia voalaza fa tezitra noho ny fampidinana ny vidin-dasantsy ireo mpivarotra, hany ka na misy aza ny solika dia isany fomba iray azon’izy ireo hampiakarana ny vidiny ny fanafenana azy. Mbola tsy fantatra mazava anefa izay tena fahamarinany saingy ny zavatra hita omaly dia mbola betsaka ireo olona mitandahatra eny amin’ny tobin-dasantsy hividy solika.
Raha ny fitarainana voaray avy amin’ny mpanjifa dia nilaza ireto farany fa tsy manan-tsafidy izy ireo noho ny asa aman-draharaha izay tena tsy maintsy ilàna solika. Ny hany fangatahan’izy ireo anefa dia ny mba hijeren’ny tomponandraikitra akaiky ity raharaha ity. Mahatsiaro fangirifiriana loatra ny amin’ny filaharana sy ny fividianana izany amin’ny sarany lafo dia lafo ny vahoaka any an-toerana. Arahina akaiky ny tohin’ny raharaha.